Ahoana no hividianana ny iPad na MacBook anao ary ahazoana ny VAT ho fanomezana | Avy amin'ny mac aho
Ahoana no hividianana ny iPad na MacBook anao ary alao ny VAT ho fanomezana
Efa fantatrao izany amin'ny Applelised mailomailo izahay hahita ny tolotra tsara indrindra sy ny fampiroboroboana amin'ny Internet ka miomàna fa hahagaga anao ny anio: Carrefour omeny anao ny VAT an'ny iPad vaovao izay maodely novidinao fa TANDREMO! satria tsy mijanona hatreo ny tolotra ka raha te hahalala bebe kokoa ianao dia mamakia hatrany.
Manolotra amin'ny iPad sy MacBook saika tsy azo averina intsony
Nanomboka ny talata 26 mey lasa teo ka hatramin'ny 7 jona ho avy izao Carrefour manome anao ny vola mitovy amin'ny VAT amin'ny fividianana iPad Air, iPad Air 2 na iPad Mini, ohatra, ohatra raha mividy ny iPad Air 2 16GB WiFi vaovao ianao izay mitentina € 489,00 €, mody ianao ho fanampin'ny iPad vaovao misy anao, miaraka amin'ny a karatra fanomezana 88,02 € azonao atao ny manavotra eo anelanelan'ny 8 sy 21 Jona.
Tianao ve ny iPad Air? Azonao atao koa ny mandray, ohatra, ny maodely WiFi 16GB amin'ny fotsy / volafotsy na volondavenona mandritra ny € 369,00 sy karatra fanomezana 66,62 € Azonao atao ny mandany amin'izay tianao amin'ny daty voalaza etsy ambony.
Noho izany, amin'ny maodelin'ny iPad Air, iPad Air 2 ary iPad Mini. Tandremo anefa fa tsy mifarana eo. Afaka mividy koa ianao misy fitaovana fanampiny ho an'ny iPad ary hahazo VAT amin'ny karatra fanomezana ianao. Jereo ireto ohatra avy amin'ny brochure ireto:
En Carrefour Toa lasa ny lohan'izy ireo, amin'ny fahatsapana tsara, satria ho fanampin'ny zavatra rehetra nolazaiko anao koa afaka mamonjy VAT ianao rehefa mividy MacBook rehetra Eny, ho an'ny fividianana solosaina finday, PC na Mac, dia hahazo karatra fanomezana ianao ho an'ny sandan'ny VAT azonao atao araka izay tianao eo anelanelan'ny 8 sy 21 Jona.
Ohatra, raha te hanavao ny Mac taloha ianao na, ny tsara kokoa dia mandehana avy amin'ny PC mankany Mac ary tianao izany 13,3 ″ MacBook Pro Retina handoa € 1.649 amin'ny Carrefour ianao ary hody miaraka amin'ny MacBook vaovao anao ary a Karatra fanomezana 286,19 €.
Tianao ve ity 11,6 ″ MacBook Air, RAM 4GB ary SD 128GB? Eny, ho an'ny € 999,00 dia mety ho anao izany ary ho fanomezana, a karatra mitentina € 173,38.
Raha mieritreritra ny hanavao ny anao ianao iPad sa ianao MacBook Sa ianao mikasa ny hahazo iray, izao no fotoana mety, tsy avelako hitsoaka izy satria vitsy ny tolotra toa izao.
Nota: Aza adino fa ny VAT dia tsy isaina amin'ny alàlan'ny fanesorana 21% amin'ny vidin'ny varotra, fa amin'ny fampidirana 21% ny vidiny ifotony. Raha te hahafantatra tsara ianao hoe ohatrinona ny vola omen'ny Carrefour anao rehefa mividy iPad, MacBook na kojakoja ho an'ny iPad ianao dia azonao atao ny manisa azy mora foana eto vao miditra ny vidin'ny varotra.
SOURCE | Carrefour
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ahoana no hividianana ny iPad na MacBook anao ary alao ny VAT ho fanomezana
Mitadiava fiasa telo mety tsy fantatrao fa afaka tanterahin'ny TextEdit
Ny app WWDC 2015 dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny Apple Watch satria voamarina ny datin'ny kaonferansa